Guusha kooxda Croatia - BBC Somali
Guusha kooxda Croatia
22 Juunyo 2016
Image caption Goolkii ay ku badisay Croatia
Ciyaartoga weerarka uga dheela dalka Croatia, Nikola Kalinic, waxaa uu sheegay in dalkiisu uu haatan ka mid yahay kooxaha ku guulaysan kara horyaalka qaramada Yurub ee sanadkan 2016 kaddib markii ay ka badiyeen qaranka Spain oo ay 2-1 ku mareen.
Laacibkan oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Blackburn ee Ingiriiska, oo isagu dhaliyay goolkii ay uga daba yimaadeen Spain oo iyadu goolka la hormartay, ayaa waxaa uu yiri: "Wax adag ayay ahayd markii goosha nalaka ka dhaliyay laakiin waxaan muujinay inaan la siman nahay kooxaha adduunka ugu sarreeya."
Ciyaartoyga Ivan Perisic, oo isagu dhaliyay goolkii ay guushu ku raacday Croatia, waxaa uu yiri: "Farxadda ayaa naga badatay, laakiin is-dhigasho ma jirto".
"Waan soo kabannay kaddib wixii ku dhacay Czech- ga kooxdeenana aan ku guulaysannay, hase yeeshee guushaasi macne ma yeelan doonto haddii aynu hadda guuldarreysanno."
Caawana waxaa dhacaya kulammo aad isha loogu hayo oo dhexmaraya kooxaha kala ah:
Talyaaniga iyo Jamhuuriyadda Ireland.
Sweden iyo Belgium
Hungary iyo Portugal
Iceland iyo Austria